That's so good, right?: Christmas in Florida (Part II)
Christmas in Florida (Part II)
ပူနွေးတဲ့ရေတွေနဲ့ ရုတ်တရက်ဖြန်းလိုက်တာဆိုတော့ လန့်သွားပေမဲ့ နောက်တော့ ချွေးရွှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာ တစ်ခုလုံး လန်းဆန်းသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ ပါးစပ်ကို ခပ်ဟဟဖွင့်ပြီး ရေပန်းက ရေတွေကိုခံယူမိသေးတာ သူတို့ကို စိတ်လှုပ်ရှား မှုများဖြစ်စေသလားတော့မသိ သူတို့မျက်ဝန်းတွေက ပိုမိုအရောင် တောက်လာ သလိုပါပဲ။တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖြန်းပေးနေတဲ့ ရေပန်းကြောင့် အပြေးလေ့ကျင့်ဖို့ သက်သက်ဝတ်လာတဲ့ နိုင်လွန်ဘောင်းဘီတိုဟာ second skin ဖြစ်နေသလို ခပ်မာမာဖြစ်နေတဲ့ ညီဘွားကိုလည်း ခပ်ရှင်းရှင်းပြသရာ ရောက်ရောပေါ့...ဟာ ဟ။
အင်း....စိတ်ထဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သလိုလို ခံစားရပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ Ruben ရဲ့ အပြုအမူကြောင့် သာယာ မိပြန်ရော။ သူ့ရဲ့သန်မာတဲ့ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ကို နောက်ကနေ ညင်ညင် သာသာလှမ်းကိုင်ပြီး “Here, Let me help you”” လို့ပြောရင်း ကျောပြင်တစ်လျှောက် ဆပ်ပြာမြှုပ်၊ ရေမြှုပ်တွေနဲ့ ဖွဖွညင်သာ ဆေးကြောပေး ပွတ်သပ်ပေးတော့တာလေ။ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးသတိ ထားမိတာကတော့ သူ့ဘောင်းဘီဟာလည်း အလွန့်ကို မာပြီးဖောင်းနေပြီဆိုတာကိုပါပဲ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်လုံးဟာ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေနဲ့အတူ ပခုံး၊ လက်မောင်းက တစ်ဆင့်.. .တဖြေးဖြေး ခါးစပ်ဆီကိုဖွဖွလေး တကယ့်ကို ခပ်ဖွဖွလေးအပြန်အလှန်ပွတ်သပ်ပေး နေတာ စိတ်ထဲမှာအရမ်းကို တမျိုးတမည်ဖြစ်လာတာ..။
ကျွန်တော် Ruben တကယ့်ကို Horny ဖြစ်နေပြီ ပြီးတော့ သူ့လက်ချောင်း ကလေးတွေက လည်း ခါးစပ်တစ်ဝိုက်ရွရွ လှုပ်ရှားနေရင်း ဘောင်းဘီကို ဆွဲချနေပြီဆိုတော့ ရင်တွေဖိုပြီး လှိုက်မောသွားလိုက်တာ....ဟူး။ Theo ကလည်း ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေ ပြောင်စင်သွား အောင်ကူညီတာလား သူ့ဘော်ဒါကို အကူညီပေး တာလားတော့မသိ ရေပန်းနဲ့ ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက်ကိုယ်ပေါ်ကို လှမ်းပြီး အသာအယာဖြန်းပေးပြန်ပါရော။ Ruben ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေဟာ ခပ်ပြည့်ပြည့် ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်နေရင်း ပန်းရောင် အပေါက်လေးကို မထိတထိ လှမ်းလှမ်း စလိုက်တဲ့ အခါ ရင်ထဲတသိမ့်သိမ့်ကို ယားကျိကျိ ဖြစ်မိသေးတာ ပေါ့။ နေရောင် ခြည်....တောက်တောက်ပပကို ကောင်းကင်ကြီးမှာ ထွန်းလင်းနေသလို ရေပန်း ဆပ်ပြာမြှူပ်နဲ့အတူ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း နွေးထွေးအောင် သူ့ရောင်ခြည် နဲ့ပြုစုပေးပြန်တယ်။
Theo ကြည့်ရင်း သူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်ထင်ပါရဲ့.....ရင်ခုန်ဆော့ ကစားနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီလှမ်းလာ သူ့မျက်နှာလေး ငုံ့ကိုင်းလာရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီက နှုတ်ခမ်းဖျားဆီသူ့အနမ်းကို တို့ထိလေတော့တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းသား၊ လျှာဖျားလေးတွေ ဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသား လျှာဖျားပါမကျန် စိုစွတ်နှုတ်ခမ်းတစ်ခု လုံးငုံထွေး နေတော့ ပါးစပ်ကို ခပ်ဟဟလုပ်ရင်း သူ့အနမ်းကိုခံယူမိနေတော့တာလေ။ သူဟာ လည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ အထိအတွေ့ကို အရသာ ခံယူရင်း ရင်အခုန်ကြီးခုန် နေတယ်ထင်ပါရဲ့ မျက်ဝန်းများတောင်ခပ်မှေးမှေးဖြစ်နေတာဗျ။ Ruben ကိုပြန်လှည့် ကြည့် လိုက်တော့ သူ့လက်ထဲမှာ ရေမြှုပ်လည်းမရှိတော့ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေလည်း လက်မှာ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေရော။ အဲဒီလက်လေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ကြည့်နေပုံက အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသဘော ကျ နေမှန်းသိသာလောက်ပါတယ်။
Ruben ရဲ့ခပ်တောင့်တောင့်ဖြစ်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းတစ်ဖက်ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ကျန်တစ်ဖက်ကိုတော့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားညှပ်ရင်း လျှာနဲ့ကစား ပေးမိတဲ့အခါ သူခမျာ ညည်းညူသံတွေ တောင်ထွက်လို့ပါ။ နို့သီးခေါင်းလေးကို ခပ်မျှင်းမျှင်းစုပ်ပေးနေချိန်မှာ သတိထားမိတာကတော့ သူ့တင်ပါးတွေ ဗိုက်သားတွေ ခပ်ဆဆလှုပ်ရမ်းသွားတာ....ဒါ သူကြိုက်လို့ပေါ့နော်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေ အထားက တင်ပါးကိုနောက်ပစ်ထား မိသလိုများဖြစ်နေ လားမသိ Theo လျှာပူနွေးနွေး လေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ နှုတ်ခမ်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေး ငုတ်စိလေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့ က အာရုံတွေကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်ပေးနေသလို ပါပဲ။ Ruben လေးလဲ ဖီးလ် တွေ tempo မြင့်လာပြီထင်ပါတယ်။ သူ့ညီဘွားကိုအပြင်ကို ထုတ်ပြီး Stroke လုပ်စပြု လား ပြုလာပြီပေါ့ ကျွန်တော့်လျှာလေး သူ့နို့သီးခေါင်းကို ခပ်မြှင်းမြှင်းဆက်စုပ်ပေး နေချိန်မှာ ဟား..။ ဟ။
Theo ခေါင်းကိုပြန်မတ်လိုက်ရင်း ရေပန်းကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပေါ်ကို ဖြန်းပက်ပေးတယ် ဘာဆက်လုပ်မလို့ပါလဲ။ အား...အ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေ သုတ်လိမ်းပေး ရင်း ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းတစ်လျှောက် ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်တာ များ... .ဖီးလ်ပဲ။ မနေနိုင် တော့ဘူး Theo ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းနမ်း။ ကျွန်တော်တို့ နှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက်နေရင်း လျှာလေးတွေ အပြန်အလှန်ထိ တွေ့ ဆော့ကစားကြတာ တစ်မျိုးပဲ ဖီးလ်အရသာက။ ကြွက်သားတွေနဲ့တင်းနေတဲ့ သူ့ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတစ်လျှောက် ပွတ်သပ်ပေးမိချိန်မှာ သူကိုင် ထားတဲ့ ရေပိုက်ကို စင်ပေါ်မှီ တင်ထားလိုက်ရင်း အနမ်းမိုး ဆက်ရွာကြတာပေါ့။
ဒါတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ Ruben ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ လက်လွတ်မခံ ကျွန်တော် ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ခပ်ဖြေးဖြေးချွတ်ပေးသလို မာထောင်နေ တဲ့ကျွန်တော့် ညီဘွားကို သူ့လက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း ဆော့ကစားနေတော့တာဗျ။ Theo က လည်း ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားဆီလက်လျှိုလိုက်ရင်း balls တွေကို ခပ်ဖွဖွ ကလိပြန် တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူ အလုပ်များကြတော့ ဒီမှာ ဖီးလ်မြင့်သထက်မြင့်ပြီပေါ့။ ခဏကြာ တော့ အတံကို ကစားနေရာကနေ ပေါင်ခြံကြားက Sensitive area ကိုတို့ထိရင်း တင်ပါးဆုံက ကျွန်တော့်ရွှေတွင်းလေးကို လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြန်ပါတယ်။
Theo တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို Ruben ပြုစုပေးနေတာကိုကြည့်ရင်း သူလည်းအား ကျလာတယ်ထင်ပါရဲ့ သူ့ဘောင်းဘီကို အသာလျှော့ ခပ်ကုန်းကုန်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်နှာရှေ့ တင်ပါးဆုံကို ခပ်ကြွကြွလာပြလေတယ်။ ခပ်ဟဟ ဖြစ်နေတဲ့ ပန်းရောင် အပေါက်လေးကို မြင်နေရတော့ ကျွန်တော်လည်းသူ့ခါးကို အသာဆွဲယူ ပန်းရောင် တောင်ကြားတစ်လျှောက် အစုန်အဆန်စီးဆင်းလိုက် အပေါက်ဝကို ချော့သွင်းလိုက်နဲ့ လျှာကျွေးနေမိတာ။ လျှာလေးကို တစ်ချက်လျှော ကနဲသွင်းလိုက်တိုင်း သူလေ တစ်ချက်တစ်ချက် ကော့ကော့သွားရင်း သူ့ညီဘွားဟာလည်း ထောင်းကနဲထောင်းကနဲ ထောင်ထောင်ထပြန်ရော။
ခပ်ဖြေးဖြေး မြက်ခင်းပေါ်မှောက်ချလိုက်ရင်း သူ့တင်ပါးနှစ်ဘက်ကို သူ့ဘာသာ ခပ်သာသာဖြဲရင်း ကျွန်တော့်အပြုအစုကို ဆက်လက်ခံယူဖို့ ပြောရရင် Ruben ကအကိုင်အတွယ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ အနမ်းပေးနေတာမျိုးကို သူငံ့လင့်ပုံရတယ်။ သူ့အပေါက်ငယ်လေးကို လျှာနဲ့ကလိထိုးလိုက် တွင်းအောင်းလိုက်လုပ်ရင်း သူ့လိင်တံ လှလှကို အသာဆုပ်ကိုင်ကြည့် ထိပ်ဖျားအပေါက်ကလေးကို အနမ်းပေး မိပြန်တော့ တာ။ ထိပ်အရေပြားလေးကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းကလေးကို ငုံထွေးမိ လိုက်ပြုစုမိနေတာ သူ့ငပဲက ပါးစပ်ထဲပြည့်ပြည့်လာသလိုပါ... အင်း.....ဖီးလ်ပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ၊ လျှာဖျားလေးတွေကြားမှာ အစုန်အဆန်ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေချိန်မှာ Ruben ခမျာ ကျွန်တော် တို့ကို ကြည့်ရင်း သူ့ညီဘွားကို ဂုတ်ချိုးနေလေရဲ့။ ထိပ်ဖျားကနေ အဆုံးထိငုံစုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းတွေ ဟာ ခြုံပုတ်ငယ်လေးတွေနဲ့တို့ထိမိရတယ်။ အနံ့ကလည်း စိတ်တွေပိုမိုထကြွစေဖို့ အားပေးတာအမှန်။ ခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်လေးလှုပ်ရှားပေးရတာပေါ့ မကြာခဏ။
အား...အ Ruben ကသူ့လက်ချောင်းတွေဆီ ချောဆီဆွတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်အ ပေါက်လေးထဲ လျှောကနဲ သွင်းလိုက် မွှေလိုက်လုပ်နေသလို Theo ကလည်း အသာကုန်းထ ကျွန်တော့်လိင်တံကို ကိုင်ပြီး stroke လုပ်ပေးလိုက်တာ တစ်ပြိုင်တည်း မှာ ဖီးလ်..အရမ်းကောင်း။ သူတို့နှစ်ယောက်ချင်း အကြည့်ဆုံလိုက် ကျွန်တော့်ကိုယ် ပေါ်မှာ အလုပ်ရှုပ်လိုက်နဲ့ သုံးယောက်လုံး အရှိန်မြင့်တက်နေကြတာ အသံတွေတောင် ထွက်မိကြရော။ အရှည် ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကလည်း ပါးစပ်ထဲရောက်နေ သလို ပန်းရောင်အပေါက်လေးဟာလည်း လက်များကြားမှာ ..ဒီဖီးလ်ကို အရမ်း... အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ..။
Ruben ရုတ်တရက်ထရပ်ရင်း သူ့ဘောင်းဘီကို အပြီးတိုင်ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ဟိုး...သူ့လီးဟာလည်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်လို ရှည်သွယ်သွယ်နဲ့ တောင့်တင်းနေတာများ အကြောများတောင် ဖောင်းနေရော။ Theo ရဲ့  ဒစ်လိုတော့ ပုံစံမလှပေမဲ့ မဆိုးပါဘူး သန့်ရှင်းသား။ Ruben ဂျစ်ရဲ့ကားဒက်ရ်ှဘုတ်ထဲက ချောဆီပုလင်းကို လှမ်းယူလိုက်ရင်း ကွန်ဒွန်ပါဆွဲယူလိုက်တယ်။ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် သန်မာတဲ့ ငနဲလေး မြင်းစီးဖို့အသင့် ပြင်နေပြီထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ကိုလှမ်းလာတာ အာရုံက သိနေသလို သူ့ရဲ့က်စိုစိုကြောင့် စအိုဝတစ်လျှောက် စိုရွှဲသွားတာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ရုတ်တရက်သတိထားမိတာက Ruben ယူလိုက်တဲ့ condom အပေါ်။အဖုအထစ်မျာစွာပါတဲ့ အထူးထုတ်ထင်ပါရဲ့ အဖုလေးတွေစီစီရီရီ။ ချောဆီ ဆွတ်ထားတဲ့ လက်ညှိုးလေးကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေရင်း အားမရတော့ဘူးလား မသိ... အား အ ဖြည်းဖြည်း။ ချောဆီကိုပိုထည့်လိုက်ပြီး သူ့လက်ခလည်အပါအ၀င် လက်သုံးချောင်းထည့်ပြီး အသွင်းအထုတ် မှန်မှန်လုပ်ပေးတော့ နည်းနည်းချောင် လည်ပြီး သူ့ညီဘွားအတွက် လမ်းကြောင်းချောမွေ့သွားရ ပေါ့..အင်း....ရှီး။ ဒါပေမဲ့.. .အသင့်မဖြစ်သေးဘူးထင်ရဲ့ အတန်ကြာကို လက်ချောင်းလေးတွေကို အသွင်းအထုတ် လုပ်ပြီး အရသာယူနေတာလေ။ ..အာ....အ။
တော်တော်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမိသလို ရင်ခုန်စွာမျှော်လင့်မိပြန်ရော။ Theo ကကျွန်တော့် ညီဘွားကို အားရပါးရပြုစုပေးနေစဉ်မှာပဲ Ruben ကလည်းချောဆီတွေရွှဲနေတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တွင်းနှိုက်ပေးနေတာ ။ ကသူ့ညီဘွားမှာချောဆီတွေဆွက် ကိုလှမ်း ယူလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုက် တသိ မြက်ခင်းအပေါ် အသာလှဲ လျောင်းလိုက်ရတာပေါ့။ ထိပ်လေးကိုသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် အိုး.....အား...အ အဆုံးထိသွင်းလိုက်တော့လည်း အင့်ကနဲပါပဲ။ ရုတ်တရက်လျှောကနဲဝင်သွားတာ ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ နာကျင်ရပါတယ်။
အဆုံးထိထည့်ပြီး မွှေနေလိုက်တာများ... so good.....ပြန်ဆွဲမထုတ်ခင် သူ့တင်ပါးတွေ ကိုလှမ်းကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ပေးမိချိန်မတော့ သူ့လီးတောင့်တင်းလာပုံများ အတွင်းထဲကကို ခံစားရတယ်မာကျောမှုကိုလေ။ ထိပ်ထိဆွဲနှုတ်လိုက် အဆုံးထိသွင်းလိုက် မွှေနေတာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အလွန့်ကို မရိုးမရွဖြစ်မိရတာ အကြိမ်ကြိမ်။ Theo လည်းသူ့ညီဘွားကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်စီတေ့ပေးလာတော့ လျှာကလေးနဲ့ ၀ိုက်ကာဝိုက်ကာ သပ်ပေးရင်းငုံပေးလိုက်တော့တာပေါ့။ Ruben လည်းဒီမြင်ကွင်းကြောင့်စွမ်းအား တွေတိုး ပြီး ဆောင့်ချက်တွေ သွက်လာတာပေါ့ ဟိုး....ဟိုး။
Ruben တော်တော်သန်မာတာပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုပွေ့ချီပြီး Jeep's bumper ပေါ်ကို တင်လိုက်တာများ စွေ့ကနဲပါပဲ။ သန်မာတဲံသူ့လက်မောင်းတွေနဲ့ ပွေ့ဖက်အနမ်းတွေ ပေးရင်း သူလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုနေခိုင်းတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ချောကနဲပေါ့။ doggy style ဖြစ်သွားတော့ သူတို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေသလို ကျွန်တော့်အတွက် လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ Theo ကကား bumper ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော့ ပါးစပ်နဲ့ တိုက်ရိုက် အဆင်ပြေသလို Ruben ကလည်း ကျွန်တော့်ခါးကိုကိုင် ခပ်ဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်တော့တာပဲ။ ဆောင့်ချက်တွေ ဆောင့်ချက်တွေ အား....အ ဒါမြင်းစီးနေတာ အစစ်ပဲ။ ဒီလိုအနေ အထားက ကျွန်တော့်ကို တကယ့် turn-on ဖြစ်စေပါတယ်။
Ruben ရဲ့သန်မာတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့် နှစ်ဦးသား ချွေးတွေထွက်လာရသလို တဘန်းဘန်း ဘော်ဒီချင်းရိုက်ခတ်သံကြောင့် ဖီးလ်ပိုတက်မိပါတယ်။ ဟိုး....ကောင်းကင်ကြီးပေါ်ထိုးတက်သွားလိုက် ၊ ချောက်ကမ်းပါးထဲ ထိုးကျသွားလိုက် သူ့ဆောင့်ချက် မွှေချက်တွေနဲ့အတူ။ စည်းချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ လေအလာမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းရွှေ့နေသလိုထင်ရတာပေါ့လေ။ Theo အရှိန်ရနေရာ ကနေထရပ် လိုက်ရင်း သူ့ညီဘွားကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင် ထုနှက်ရင်း အဖြူရောင် man-juice တွေကျွန်တော့ပါးပြင်စီကို ဖြန်းပက်လိုက်တာ အများကြီးပဲ...ဟူး။
Theo သူ့ရဲ့ အရသာအဆုံးထရောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဘက်ကို လှည့်လာပြန်တော့ တာပေါ့။ ချောဆီခပ်များများကို သူ့လက်မှာထည့် Ruben ရဲ့ဆောင့်ချက်ကြောင့် လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ပြီး ခပ်သွက်သွက်ကစားပေးတာများ..... ဖီးလ်...တစ်ခါမှ ဒီလို ဖီးလ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်မခံစားဖူးတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ဒီအချိန်လေးဟာ နိဗ္ဗာန် ပါပဲ။
Ruben ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ သူ့အားကုန်ဆောင့်ချက်တွေလားမသိ မြန်လာသလို အာ....အ ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး....မြက်ခင်းပြင်ပေါ် ပန်းထုတ်လိုက်မိပြီ....ရှီး။ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေ ဖီးလ်မြင့်တက်လို့ ညည်းညူသံတွေ ခပ်ရှုံရှုံဖြစ်လိုက် ပွလိုက်နဲ့ညှစ်မိနေတဲ့ ကျွန်တော့် asshole ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် Ruben လည်းမနေနိုင် တော့ မထိန်းနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ အရှိန်ပြင်းနေရာကနေ ရုတ်တရက် လျော့သွားရင်း သူ့တင်ပါးတွေ ပေါင်တံတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်သွားရင်း.. good taste...။
မြက်ခင်းပေါ်မှာ ခင်းထားတဲ့ ဖျာချပ်ပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ကြရင်း အတူတူအနားယူမိတယ် ခဏတာ။ အမောပြေသွားတော့ ဆပ်ပြာတွေ ရေမြှုပ်တွေ အ၀တ်တွေယူရင်း ရေချိုးခန်းမှာ ရေအတူစိမ်ချိုးဖြစ်ကြတာပေါ့။ ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေလာရင်း ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ ဒီအချိန်လေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့်ကို Relax ပါ။
အလုပ်တွေပြန်မလုပ်ရသေးခင် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဆီပြန်မသွားခင် အပန်းပြေခဲ့တဲ့ခရီးလေးဖြစ်ခဲ့ပြန်ပေါ့။
နောက်များဆိုရင်လည်း ဒီလိုပဲ ကမ်းခြေတွေဆီ အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖြစ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရော အပန်းပြေခရီးထွက်ကြပါလား ဒီလိုခရီးသွားရာသီမှာ....ဟား ဟား။
Posted by Alex Aung at 3:47 PM
Can you please let me know hwo to read in Myanmar? Because I can not read here in other countries,do I need to download something?
Love is ????